White Tiger (2012) | MM Movie Store
ရုရှားတငျ့တပျရငျးရဲ့ အရာရှိကွီးတှေ အစညျးအဝေးတဈခုအရေးပျေါပွုလုပျနတေယျ….အကွောငျးကတော့ သူတို့ရဲ့ တငျ့ကား(၁၅)စီးနဲ့ ဘီးတပျအမွှောကျတှကေိုဂြာမနျတှကေ ဖကျြဆီးသှားလို့ပါပဲ….တငျ့တပျရငျးခငျြး စီးခငျြးထိုးတယျဆိုရငျလကျခံလို့ရပမေယျ့
ရုရှားတှရေဲ့တငျ့ (၁၅)စီးနဲ့ ဘီးတပျအမွှောကျတှကေို(၁၀)မိနဈအတှငျးဖကျြဆီးသှားတာက အဖွူရောငျတငျ့(၁)စီးထဲဖွဈလို့ပါပဲ…ဒီတငျ့ကတော့ ဂြာမနျတို့ရဲ့ White Tiger ဆိုတဲ့တငျ့ပါ….
ဒီ Tiger တငျ့အမြိုးအစားဟာ FURY ဆိုတဲ့ကားမှာ ဘရကျပဈတို့M4 Sherman တှကေို အားပါတရဖကျြဆီးပွသှားတာ ကွညျ့ဖူးတဲ့သူတှသေိမှာပါ တဈစီးထဲက ဖကျြဆီးသှားတော့ ရုရှားတငျ့တပျက အကွီးအကဲတှနေဲ့နညျးပညာသမားတှအေတှကျတော့ တကယျ့သှေးပကျြစရာပါပဲ…
ပြောကျကြားစဈပုံစံဆငျနှဲနတေဲ့ ဒီ White Tiger ကွီးကွောငျ့မြားစှာအထိနာနတေဲ့ရုရှားတှဟော တနျပွနျတိုကျခိုကျဖို့ တငျ့တပျဖှဲစီစဉျပါတော့တယျ..ဒီအထဲမှာတော့ အတှအေ့ကွုံမြားစှာရှိနတေဲ့ တငျ့ကား(၁၅)စီးတိုကျခိုကျခံရစဉျမသပေဲကနျြရဈခဲ့တဲ့ ယာဉျမောငျးတဈဦးကို ခေါငျးဆောငျခနျ့ပွီး တိုကျခိုကျဖို့ကွံရှယျကွတယျ…
ကိုငျး သူတို့အောငျမွငျမလားဆိုတာကိုတော့…..ကိုငျး တငျ့ကား စဈကားတှမှေ သဘောကွတဲ့သူတှအေတှကျကားကောငျးတဈကားဖွဈလို့ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး….
ရုရှားတင့်တပ်ရင်းရဲ့ အရာရှိကြီးတွေ အစည်းအဝေးတစ်ခုအရေးပေါ်ပြုလုပ်နေတယ်….အကြောင်းကတော့ သူတို့ရဲ့ တင့်ကား(၁၅)စီးနဲ့ ဘီးတပ်အမြှောက်တွေကိုဂျာမန်တွေက ဖျက်ဆီးသွားလို့ပါပဲ….တင့်တပ်ရင်းချင်း စီးချင်းထိုးတယ်ဆိုရင်လက်ခံလို့ရပေမယ့်
ရုရှားတွေရဲ့တင့် (၁၅)စီးနဲ့ ဘီးတပ်အမြှောက်တွေကို(၁၀)မိနစ်အတွင်းဖျက်ဆီးသွားတာက အဖြူရောင်တင့်(၁)စီးထဲဖြစ်လို့ပါပဲ…ဒီတင့်ကတော့ ဂျာမန်တို့ရဲ့ White Tiger ဆိုတဲ့တင့်ပါ….
ဒီ Tiger တင့်အမျိုးအစားဟာ FURY ဆိုတဲ့ကားမှာ ဘရက်ပစ်တို့M4 Sherman တွေကို အားပါတရဖျက်ဆီးပြသွားတာ ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေသိမှာပါ တစ်စီးထဲက ဖျက်ဆီးသွားတော့ ရုရှားတင့်တပ်က အကြီးအကဲတွေနဲ့နည်းပညာသမားတွေအတွက်တော့ တကယ့်သွေးပျက်စရာပါပဲ…
ပျောက်ကျားစစ်ပုံစံဆင်နွဲနေတဲ့ ဒီ White Tiger ကြီးကြောင့်များစွာအထိနာနေတဲ့ရုရှားတွေဟာ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ တင့်တပ်ဖွဲစီစဉ်ပါတော့တယ်..ဒီအထဲမှာတော့ အတွေ့အကြုံများစွာရှိနေတဲ့ တင့်ကား(၁၅)စီးတိုက်ခိုက်ခံရစဉ်မသေပဲကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကို ခေါင်းဆောင်ခန့်ပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ကြံရွယ်ကြတယ်…
ကိုင်း သူတို့အောင်မြင်မလားဆိုတာကိုတော့…..ကိုင်း တင့်ကား စစ်ကားတွေမှ သဘောကြတဲ့သူတွေအတွက်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်လို့ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး….